Mayelana NATHI - Zhejiang Baolai Group Co., Ltd.
IZhejiang Baolai Group Co., Ltd. (Umkhiqizo: IGlazzy) inolwazi ngokukhiqiza izibuko iminyaka engaphezu kwengu-20. Inkampani yethu ingenye yenkampani ehamba phambili ebhizinisini lezingubo e-China, enekomkhulu layo eChina enkulu ekhiqiza indawo yezingubo - Taizhou Linhai.
Singakhipha noma yiluphi uhlobo lwezingubo zamehlo kuphela ngaphandle kwamalensi wokuxhumana, umugqa wethu omkhulu womkhiqizo ufaka: Izibuko zelanga, ifreyimu eyi-Optical, Izibuko zokufunda, izibuko zezemidlalo, izibuko ze-Acetate, njll. , Lipton njll ..... Singabonisa konke ukuhlolwa kwesihlobo sefektri ukuze kuthenjwe kukho uma udinga. Eminyakeni ecishe ibe ngu-8 ithumela kwamanye amazwe isipiliyoni, sakha umnyango wokuthengisa oqinile wokuncintisana nobungcweti, iqembu elinamakhono lokuqamba, iqembu le-QC / QA elibhekele lokho.
Sonke sinenhloso eyodwa: ukuhlinzeka ngemikhiqizo ehamba phambili kuwo wonke amakhasimende ethu athandekayo. Ngobubanzi bekhwalithi ephezulu, imikhiqizo enentengo enengqondo nemiklamo yesitayela, sinokuncintisana okuqinile emakethe yethu. Siphinde sigxile ekulawuleni ikhwalithi, izinsizakalo zamakhasimende, ekulethweni kwesikhathi futhi sithatha lokhu njengezici eziyinhloko ekuthuthukiseni ikhono lokuncintisana emakethe yomhlaba. Ukwakha inani eliphakeme lamakhasimende ethu ukuphishekela kwethu njalo. Siyakwamukela ukuvakashela imboni yethu. Sithemba ukuthi singaba nethuba lokwakha ubuhlobo bebhizinisi nawe futhi sakhe ukubambisana kwesikhathi eside.